Si loo buuxiyo shuruudaha farsamo ee macaamiisheeda inta lagu guda jiro hawlgalka mashiinada baaxada weyn, qalabka shaqada waa in si hufan loogu hagaajiyaa meel go'an qalabka mashiinka inta la isticmaalayo. Si looga fogaado qalabka shaqada inta lagu jiro howsha makiinada. Markay barakacu affec yahay ...
Kahor mashiinka saxda ah ee qaybaha gawaarida, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo fahmo aqoonta ku habboon ee Shenzhen machining machining. Kadib, maxay yihiin qodobbada farsamo ee mashiinka saxda ah? 1. Fududee dayactirka iyo dayactirka mashiinka, keydso shaqada, goynta farsamada iyo ...
Sida aynu wada ogsoonahay, sababta ka shaqaynta qaybaha saxda ah loogu yeedho sifeynta saxda ah waa si sax ah maxaa yeelay habraacyada waxqabadka iyo shuruudaha habraaca waa kuwo aad u sareeya, iyo shuruudaha saxsanaanta ee badeecadu aad ayey u sarreeyaan, iyo saxsanaanta ka shaqeynta qaybaha saxda ah waxaa ka mid ah. ..
Farsamaynta farsamadu waa nooc geedi socod guud oo dhan ah. Farsamaynta farsamaysan ee halkan lagu xusay waxay si gaar ah u tilmaamaysaa hababka loo adeegsado daaweynta dusha sare. Waxaa jira isugeyn qayb ah oo laxiriira farsamaynta "Samaynta P ...
Wax soo saarka birta ah ee qolofka qalabka ayaa badanaa loola jeedaa sii wadida farsamooyinka taarikada miisaanka culus leh, waxayna ka ciyaari kartaa door aad u wanaagsan hawshan. Sababtoo ah qaybaheeda la farsameeyay ayaa khibrad u leh, sidaa darteed dhammaan goobta Waxay sidoo kale soo jiidatay dad badan oo indho-indheyn ah ...
Sida looga dhigi karo ka baaraandegidda birta xaashida qalabka qolof fiican iyo faahfaahinta ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho
Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay farsameynta birta xaashida qalabka qolalka. Inta hawsha lagu gudajiro, waa inaad dhab ahaantii fiiro gaar ah u yeelatid faahfaahinta dhammaan dhinacyada, si ay door fiican uga ciyaari karto. Dad badan ayaa tixgelinaya shuruudahaas gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaanan wax badan ka aqoonin sp ...
Astaamaha lagu shaqeynayo ee qalabka mashiinka CNC
1. La waafajin karo Marka lagu shaqeynayo qalab shaqo oo cusub mashiinka mashiinka CNC, ka shaqeynta qalabka shaqada waxaa lagu ogaan karaa oo keliya iyadoo dib loo naqshadeeyo barnaamijka wax lagu shaqeynayo ee workpiece-ka cusub. Marka lagu shaqeynayo qalabka shaqada ee qalabka mashiinka CNC, kaliya qalab fudud ayaa loo baahan yahay, loomana baahna in la sameeyo ...